Iifaki ezingasebenzi kwi-V4.4
umbuzo Iifaki ezingasebenzi kwi-V4.4
iinyanga 4 kwiveki 1 eyadlulayo - iinyanga 4 kwiveki 1 eyadlulayo #1364 by rgp1942
Yintoni endiyenzayo? Ndikhupha zombini iindiza kunye neenkcukacha zeP3D V4 kwaye ndisebenzisa ii-installers ezifakiwe ukuzifaka kwi-V4.4. Kuzo zonke iimeko ndihlolisise ukuba ifakwe kwi-P3D V4. Ndizamile zombini ukuvumela iifaki zihambe ngokuzenzekelayo, kwaye zikhomba i-installer kwi-directory ye-P3D. Emva kokufakwa, iimveliso azikho kwi-P3D, kwaye azibonakali kwi-Addit! Pro. Ukuba ndithatha ixesha kunye neengxaki zokuzifaka ngesandla kwiifolda ze-P3D, konke kulungile. Ifolda yam Inkqubo yeP3D i:
"F: \_ Inkqubo yeefayile \_ Lockheed Martin \_ Prepar3D v4"
Ezinye iifolda ze-P3D zi-C:
"C: \_ ProgramData \_ Lockheed Martin \_ Prepar3D v4"
Nazi iifayile ze-2 ukuvavanya kunye:
mt_adams_and_mt_st__helens.exe - umfakisi 9.74
sikorsky_s76a_spirit.exe - umfakeli 9.85
Ngoku ndi-Addit! Pro v8.6.1 kwaye unokuzama ukuyisebenzisa njengento yokusebenza, kodwa kuya kuba kuhle ukuba kufakwe iifayile .exe.
Uhlobo lokugqibela: Iinyanga ze-4 ze1 iveki edlulileyo rgp1942. Isizathu: typo echanekileyo
iinyanga 3 3 kwiiveki ezidlulileyo #1370 by rikoooo
Ngaba unokuqinisekisa ukuba i-installer ikopi iifayile kwi "F: \_ Program Files \_ Lockheed Martin \_ Prepar3D v4" kwaye ingabi "C: \_ Inkqubo yeefayile \_ i-Lockheed Martin \_ Prepar3D v4"
iinyanga 2 3 kwiiveki ezidlulileyo - iinyanga 2 3 kwiiveki ezidlulileyo #1381 by umqhubi we-jumpseat
Ngaba ubhalise yakho imveliso? Ukuba akunjalo, kunokuba kukho ukulinganiselwa kwizinto onokuzikhuphela. Ndilwela into efanayo. Ukuba unobulungu obukhululekile, awunazo zonke izixhobo zokudlala nazo. Amalungu ahlawulwe athola zonke iintsimbi kunye neengcingo.
Uhlobo lokugqibela: Iinyanga ze-2 iiveki ze-3 ezedlule umqhubi we-jumpseat.
iinyanga 2 1 imini eyadlulayo #1391 by IanH
Ndineengxaki efanayo. Akukho nto isebenzayo kwi-P3D v4.
Ndiyayeka kunye noRioooo.
iinyanga 2 1 imini eyadlulayo #1392 by rikoooo
Ngaba unako ukuchaneka ngakumbi, nceda? Ukufakela akusebenzi njenge-rgp1942 okanye ulayishiwe ezinye izongezelelo ezingahambisani ne-Prepar3D v4? Ziinkalo ezimbini ezahlukeneyo.
Ngolwazi, uluhlu lwe-Prepa3D v4 ene-add-ons ehambelanayo apha: www.rikoooo.com/prepar3d-v4
iinyanga 2 1 imini eyadlulayo - iinyanga 2 1 imini eyadlulayo #1393 by rikoooo
Ukuba i-Prepar3D v4 ikuF: I-Files Programs \_ Lockheed Martin \_ Prepar3D v4 uze ukhethe ukufakela kwesiko kwaye qhosha iqhosha lokukhangela i-F: \_ Program Files \_ Lockheed Martin \_ Prepar3D v4 njengefolda yokuya kwindawo. Kufuneka isebenze ngaphandle kwengxaki.
Nangona kunjalo, akufanele ube nefayile F: \_ Programme Files \_ kwi-F: ngokusemthethweni "Iifayile zeNkqubo" igcinelwe iC: / drive kwaye ndicinga ukuba yintoni ebangela ukudideka komfakeli, ndiza kubona ukuba ndiyakwazi lungisa ukuba kungekudala.
Last edit: 2 months 1 day ago by rikoooo.
iinyanga 2 18 hours ago #1394 by IanH
Inkqubo kufuneka ukuba iyahambisana -ATR 72.
Ukuba ndiyishiya ngokuzenzekelayo, ifaka kwi C: drive.
Indlela eya eP3D yam nguF: \_ Prepar3D v4.
Ngaphandle kokufakela kwesiko kunye nokukhomba kule ndawo, akusebenzi.
iinyanga 2 10 hours ago #1395 by rikoooo
Namhlanje ndihlaziye i-installer ye-ATR 72 kunye ne-ATR42 nceda ukhupha kwakhona, ngoku kufuneka isebenze.
Zonke izongezelelo ze-Prepar3D v4 ziya kuhlaziywa kwiintsuku ezilandelayo ze-3. Enkosi
iinyanga 2 8 hours ago #1397 by IanH
Ukholo lwam kwi Rikooo lubuyiselwe!
Ngoku ifakwe kwaye ibonakala isebenza ngokuzeleyo ngoku.
iiveki 1 ngenyanga 4 eyadlulayo #1404 by rikoooo
Zonke izongezo ezidweliswe apha: www.rikoooo.com/prepar3d-v4 ziye zahlaziywa ukulungisa umba kunye nokufakwa.